Qatar oo War kasoo saartay Qaraxii Al-shabaab ee ka dhacay Xerada Ciidanka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Qatar oo War kasoo saartay Qaraxii Al-shabaab ee ka dhacay Xerada Ciidanka
Qatar oo War kasoo saartay Qaraxii Al-shabaab ee ka dhacay Xerada Ciidanka
Dowladda Qatar ayaa si kulul uga hadashay qaraxii Is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay afaafka hore ee Xerada tababarka Ciidamada ee Jeneral Dhega-badan ee Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka, kaasi oo geystay khasaaro badan.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Qatar ayaa soo saartay Qoraal lagu cambaaraynayo Qaraxaasi oo ay ugu yaraan 20 qof oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ku geeriyootay, halka ay in ka badan 40-kalena ku dhaawacmeen.
Qatar waxay kaloo tacsi u direen saaxiibada, Dowladda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo inuu Allaah u naxariisto dadkii geeriyooday iyo inuu Caafimaad Deg-deg ah siiyo kuwii ku dhaawacmay qaraxaas oo la dhigay Isbitaalo.
“Dowladda Qatar waxaa ay ku celineysa mowqifkeeda adag ee diidmada rabshadaha, argagixisada iyo falal dambiyeed, iyadoon loo eegin ujeedada iyo sababaha” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Qof isku soo xiray Jaakad walxaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyey dhalinyaro farabadan oo dooneysay inay ku biiraan Ciidanka Xoogga dalka, kuwaasi oo saf dheer ugu jiray diiwaan-gelin ka socotay Xerada tababarka Ciidamada ee Jeneral Dhega-badan ee Muqdisho, waxaana Mas’uuliyada weerarka sheegtay Al-shabaab.
Maqaal horeWafdi ka socda Beesha Caalamka oo ku wajahan Dhuusamareeb + ujeedka
Maqaal XigaDab geystay khasaaro oo ka kacay goobo Ganacsi oo ku yaalla Muqdisho